UMashaba umemezele abazoqala umdlalo neZambia | News24
UMashaba umemezele abazoqala umdlalo neZambia
Johannesburg – Umqeqeshi weBafana Bafana uShakes Mashaba umemezele abadlali abayishumi nanye abazoqala umdlalo uma iqembu lakhe selibhekene neZambia kowobungane wokuzilolonga ngaphambi kwendebe ye-2015 Afcon e-Equatorial Guinea.
IBafana izobhekana neChipolopolo ngeSonto nokuzoba wumdlalo waleli qembu wokugcina kuleli ngaphambi kokuthi lilibangise Gabon lapho lizozilungiselela khona lo mqhudelwano ozoqala ngomhlaka 17 kuJanuwari.
Kubikwa ukuthi iBafana isazodlala neGabon neCameroon ngaphambi kwalo mqhudelwane omkhulu wamazwe angu-32 ezwenikazi i-Afrika.
OLUNYE UDABA: ISAFA inxusa abalandeli koweBafana neZambia
Kuvele ukuthi u-Anele Ngcongca nguyena ozobe ehola leli qembu njengoba kulindeleke ukuthi uDean Furman ajoyine iqembu ngoMsombuluko.
Kuvele ukuthi u-Andile Jali noPatrick Phungwayo ngeke babonakale kulo mdlalo ngenxa yokulimala abanakho emadolweni.
Ngokubika kweSoccerLaduma naba badlali abamenyezelwe nguMshaba abazoqala umdlalo wangeSonto neZambia: uDarren Keet,u-Anele Ngcongca, uThabo Matlaba, u-Eric Mathoho, uRivaldo Coetzee, uThamsanqa Sangweni, uReneilwe Letsholonyane, uMandla Masango, u-Oupa Manyisa, uBongani Ndulula noTokelo Rantie.
Ebhentshini kuzobe kuhleli laba: uBrilliant Khuzwayo, uJackson Mabokgwane, uThulani Hlatshwayo, uBongani Zungu, uThuso Phala, uThemba Zwane, uBernard Parker, uSibusiso Vilakazi noSiyabonag Nhlapho.